Afar katirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay gobolka Baay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAfar katirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay gobolka Baay
August 25, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Al-Shabaab. [Sawir Hore]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Deynuunay ee gobolka Bay maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
Weerarka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad hubeysan oo katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala deegaanka Deynuunaay oo qiyaastii 20 kiilomotir dhanka bari kaga beegan magaalada Baydhabo.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Axad ah ka qabsatay ciidamada dowlada Soomaaliya magaalada Goofgaduud oo kutaala koonfur-galbeed Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha. Sarkaal dhanka amaanka ah oo katirsan dowlada Soomaaliya oo codsaday in [...]